Sidee dib loogu bilaabayaa ciyaaraha bilaha joojinta ka dib? - Horyaalnimada
Waa maxay ciyaaraha ugu fiican ee lagu soo celin karo qaab dhismeedkee?
Waa maxay ciyaaraha ka dib nasasho dheer?
Sidee loogu soo noqdaa ciyaaraha kaligaa?
Waa maxay ciyaaraha aad ku ilaalinayso jidhkaaga?
Waa maxay isboortiga ugu fiican caafimaadkaaga?
Isboortigee ayaa dooranaya marka aad caajis tahay?
WAA XIISO BADAN: Waxaad waydiisay: Sidee loo sameeyaa tababarka miisaanka ee jimicsiga?
Ka dib, adigoo si fiican u soo kabanaya muruqa iyo miskaha, miskaha iyo lugaha, waxaad bilaabi kartaa dhaqdhaqaaqyo firfircoon, sida teniska, orodka, barafka. Hawlaha ay tahay in la iska ilaaliyo waa kuwa ku lug leh boodada, iyo khatarta dhicista.
Hadba hal gool u fiirso. Hadda oo aad ogtahay SABABTA aad u rabto inaad dib ugu soo laabato isboortiga, waa waqtigii aad aqoonsan lahayd SIDA loo sameeyo. Taas awgeed, waxaad u baahan doontaa inaad ka mid noqoto ururka ugu yar. Soo kabashadaada, waxaan kugula talineynaa 2 kulan oo isboorti asbuucii 1 bil.
WAA XIISO BADAN: Sidee loo tababaraa rugby kaligaa?
Yoga, jimicsiga, orodka, dabaasha, baaskiil wadida… doorashada adigaa iska leh. Soo hel dheelitirka u dhexeeya ciyaaraha degdega ah iyo kuwa yar oo "jilicsan". Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa 2-3 kulan oo yoga ah wiigii oo lagu beddelayo 2 fadhi oo orod ah (ama dabaasha).
Natiijooyinkoodu waxay muujinayaan in baaskiil wadista, dabaasha, aerobics-ka iyo isboortiga raquet ay bixiyaan faa'iidooyin rajada nolosha oo ka wanaagsan orodka.
Koritaanka jaranjarada: Haa, lugahaagu way ku necba doonaan, laakiin waxaad lumin doontaa 440 kalori 30 daqiiqo gudahood. Isboortigani wuxuu shaqeeyaa glutes, bowdyaha iyo xitaa gacmaha. Hubi inaad beddesho jimicsigaaga: u kac adiga oo jilbahaaga kor u qaadaya, la bax cagahaaga oo wada socda, ka dibna laba laba...
WAA XIISO BADAN: Maxaa loo rogay funaanadaha Coupe de France?
Sidee loo noqon karaa Bourdieu ciyaaraha fudud?
Kubadaha teniska ee la dooranayo?
Jawaab degdeg ah: Waa maxay masaafada u jirta tuurista xorta ah ee kubbadda koleyga?
Sidee bay darawaliinta Formula 1 u cabbaan?
Aaway ka-qaybgalkii kubbadda koleyga?
Jawaabta ugu fiican: Waa maxay boosaska loogu soo baxayo Europa League?
Sidee loo abaabulaa urur isboorti?